कार्टुन क्रुजका आश्मा विश्वकर्मा र सरोजले गरे धुमधामसँग विबाह – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/कार्टुन क्रुजका आश्मा विश्वकर्मा र सरोजले गरे धुमधामसँग विबाह
भिडियोमा कार्टुन क्रुका सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्मासँगै मनिषा सापकोटा, रश्मी भट्ट र अर्जुन गुरु फिचर्ड छन् । काठमाडौंको अनुप्रास्ता पार्टी प्यालेसमा छायांकन गरिएको गीतमा फराज अर्पणको छायांकन र सम्पादन, दिनसन शाहको रंग संयोजन र गणेश शाहीको निर्देशन छ। भिडियो
छोरी म र्दा मुख हेर्न समेत किन आएनन माइती ? साना दुई छोरीले गरे आमाको किरिया (भिडियो हेर्नुस्)
गायक राजेश पायल राई को अगालोमा बेरिने को हुन् यी युवती ? के उनीहरु प्रेममा छन् ? बिहेदेखि सम्बन्धको बारेमा यसरी खुलाए राजेश , हेनुहोस